Qaar ka mid ah qoddobada wada-hadallada federaalka iyo Jubbaland oo la isku mari waayey (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 22, 2013 6:46 b 0
Adis-Ababa, August 22, 2013 – Magaalada Adis-Ababa ee dalka Ethopia waxaa ka socda wada-hadalladii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, iyadoo kulamo arintaas lagu gorfeynayo ay ilaa shalay si dar dar leh uga socdaan wada-hadalladu.
Wada-hadallada oo ay qaban qaabadiisa leeyihiin dalalka urur gobolleedka IGAD, ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay jiraan qodobo badan oo la isku fahmi waayey, halka qaar kalena la isku afgartay.
Ergadda ka socda dhinaca federaalka ee wada-hadalka jooga ayaa dalbaday in la bedelo magaca Jubbaland, iyagoo ku adkaystay in aysan suurta-gal ahayn gobollada ?Jubbooyinka iyo Gedo magacaas loo isitcmaalo.
Cabdinaasir Guure Faarax (Jeer) oo ah la taliyaha Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa radio Daljir u sheegay in Madaxweynaha dowladda federaalka ah ay u gudbiyeen in aysan ahayn maamul doonaya gooi isu tag, basle ay doonayaan in ay dowladda federaalka ay ka mid noqdaan.
Ugu dambeyntii wuxuu sheegay mudane Jeer in dhowaan uu maamulka Jubbaland qaadi doono talaabo muuqata oo dhismaha maamulka la xiriirta, isla markaasna ay socdaan la tashiyo kala duwan, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey wada-hadallada ka socda Adis-Ababa.
Maxamuud Cabdi ayaa waraystay Mudane Cabdinaasir Jeer oo Adis jooga